Dastabej » स्थानीय तह निर्वाचनः बाँकेमा पुरानै अनुहार उम्मेदवार दोहोरिदै
स्थानीय तह निर्वाचनः बाँकेमा पुरानै अनुहार उम्मेदवार दोहोरिदै – Dastabej
स्थानीय तह निर्वाचनः बाँकेमा पुरानै अनुहार उम्मेदवार दोहोरिदै
नेपालगन्ज । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि उम्मेदवार बनाउन सर्बसम्मत नाम सिफारिस गरेको छ । जिल्लाको पुर्बीउत्तर क्षेत्र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुखका लागि वर्तमान पालिका प्रमुख लाहुराम चौधरी लगायतका नाम सिफारिस भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा वर्तमान उपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरी र झिनो मतले नेकपा (एमाले) संग पराजित भानुभक्त भट्राईको नाम कांग्रेसबाट पठाइएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा वर्तमान उपप्रमुख उमा थापा मगर र गत निर्वाचनमा प्रमुखमा पराजित डा. सुरेश कनौडियालगायत दर्जन बढीले दाबी गरेका छन् । वडाध्यक्ष र सदस्यमा पनि पुरानै अनुहार दोहोरिनु पर्ने अडान राख्दै उम्मेलवारी दाबी गरिरहेका छन् । ‘मुख्य कुरा पालिकामा दोहोरिनु भन्दा पनि चुनाव कस्ले जित्नसक्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले दोहोरिनु ठूलो मुद्दा भएन,’ नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण गौडेल भन्छन्,‘गत चुनावबाट जित्नु भएका नेताहरुको नाम यसपल्ट पनि सिफारिस गरेर पठाइएको छ ।’ उनले उम्मेदवारहरुको नाम प्रदेश तहसम्म पुगिसकेको जनाए । ‘केही दिनमै उम्मेदवारीको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
गत निर्वाचनमा कांग्रेसले राप्ती सोनारी र डुडवा गाउँपालिकामा जितेको थियो । एमालेले कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुख, खजुरा, बैजनाथ र जानकी गाउ“पालिकामा जितेको थियो । कोहलपुरमा कांग्रेसकी सन्जुकुमारी थारुले उपमेयरमा विजयी भएकी थिईन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा राप्रपाका डा. धवल शम्सेर राणा, उपमेयरमा कांग्रेसकी उमा थापा मगर बिजयी भएका थिए । नरैनापुर गाउँपालिकामा संघीय समाजबादी फोरमले विजय प्राप्त गरेको थियो ।
नेकपा एमालेबाट गते निर्वाचनमा विजयी भएका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुले फेरि पनि उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर रुचाल, जानकी गाउँपालिकाको उपप्रमुख भुमिसरा धिताल उपप्रमुख, खजुरा गाउपालिका प्रमुखमा वडा न १ का अध्यक्ष सुमन मल्लको नाम सिफारीसछ । वडा न. ४ वडाध्यक्ष तिलकबीर सुनार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका वडा न. १ का अध्यक्षले फेरि पनि वडाध्यक्षमै सिफारीस भएका छन् । नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले उम्मेदवार छनौट भइरहेको बताउँछन । ‘उम्मेदवारी टुंगो लागिरहेको छ,’ उनले भने,‘जित्न सक्ने उम्मेदवारले टिकट पाउने छन् । पुरानै जनप्रतिनिधि भए पनि केही फरक पर्दैन ।’
नेकपा (माओबादी) केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष डम्बर विकले केही पालिकाहरुमा उम्मेदारहरुको नाम सिफारिस गरेको बताए । उनले केही पालिकाहरुमा छलफलकै क्रममा रहेको जनाए । ‘अझ केन्द्रले गठबन्धन गरिसेको छ । जिल्लामा पनि गठबन्धनका लागि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने,‘गठबन्धनको निर्णय अनुसार उम्मेदवारीको टुंगो लाग्छ ।’
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले दलहरुको यस्तै गतिबिधिले सर्वसाधारणहरुमा राजनीतिप्रति बितृष्णा बढेको सुनाउछन् । ‘लोकतन्त्रमा सधै एउटै मान्छेले नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ भने अर्को इमानदार कार्यकर्ताले कहिले पालो पाउँने,’ उनले भने,‘सत्ताको स्वाद चाखिसकेकाले जनप्रतिनिधिहरु फेरि पनि दोहोरिन चाहेका हुनसक्छन् ।’
६ बैशाख २०७९, मंगलवार १२:३८ प्रकाशित